“Révélation de l’année”: hanolotra seho roa ry Rossito sy Gastick | NewsMada
Tratran’ny vela-pandriky ny polisy: maty voatifitra ilay jiolahy saika handroba mpandraharaha
Réouverture des frontières: Enième concertation
“Révélation de l’année”: hanolotra seho roa ry Rossito sy Gastick
Par Taratra sur 28/11/2018
«Révélation de l’Année». Io ny lohatenin’ny seho roa iarahana amin’i Rossitto sy i Gastick, eto an-dRenivohitra amin’ny fiandohan’io volana Desambra io. Ny voalohany, eny amin’ny Jao’s Pub Ambohipo, ny asabotsy 1 desambra. Aorian’izay, eny amin’ny Le Glacier Analakely ny fotoana, ny alakamisy 6 desambra.
Samy hanomboka amin’ny 9 ora alina avokoa ny lanonana amin’ireo hetsika ireo. Mpanakanto anisan’ireo nisondrotra haingana eo amin’ny tontolon’ny mozika mafana i Rossito sy i Gastick. Tafita avy hatrany tany an-tsofin’ny mpihaino, indrindra ny eto an-dRenivohitra, ny mozikan’izy mirahalahy, izay efa manana ny lazany any amin’ny faritra, talohan’izany.
Mikasika ny fampisehoana hotanterahin’izy ireo, nambaran’i Rossito fa hisy fahasamihafana ny zavatra ho hita ao amin’ny Jao’s Pub sy eny Analakely. Samy manana ny hirany sy ny gadona manavanana azy avy mantsy izy roa lahy ireo ka samy hanasongadina izany, mandritra ireo seho roa voalohany eto an-dRenivohitra ireo.
Anisan’ny andrasan’ny mpankafy ny fampiaraham-peon’izy mirahalahy. Hanome fahafaham-po izy ireo, amin’izao hetsika izao, araka ny fampanantenana. Tsy ho voafetra ny lanonana fa miankina amin’ny filàn’ny mpankafy. Hanelanelana ny fampisehoana, eny amin’ny Jao’s Pub ny fanentanan’i DJ Faiheg. Ho an’i Rossitto manokana, an-dalana ny famoahana rindran-tsary vaovao. Hotohizana any amin’ny faritra samihafa kosa ny seho an-tsehatra, amin’ny fiandohan’io taona vaovao io.
Fankalazana ny faha-30 taona…Nafana ny fiarahan’ny mpankafy sy ny tarika Rebika 20/09/2021
Fanapariahana zavakanto: manjaka ny ampitain-davitra 20/09/2021
Antsahamanitra: “Aina iray” tokoa ny mpijery sy ny Mage 4 20/09/2021
Tontolon’ny reggae: nodimandry i Sammy Rastafanahy 20/09/2021
Volley ball-Mada Seniors: tsara fanombohana ny GNVB sy ny Stefauto 20/09/2021
Sombintsombim-baovao: Fifanintsanana “Mondial 2022”…